မိုက်ကယ်အယ်ဗာဆန်သည် ကွန်ပျူတာသုံး ဘာသာစကားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသည့် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာသုံး စာ နှင့် အက္ခရာ များ ကို အများလက်ခံနိုင် သည့် ဘုံသုံးစနစ်ဖြစ်ရေးအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၁၉⁠၉၃ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဘာသာစကား စံနှင့်ပတ်သက်၍ သူ့အဆိုပြုချက်ပေါင်း ၂၀⁠၀ ကျော်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူအဆိုပြုခဲ့သည့် စာလုံးအက္ခရာပေါင်း ထောင်နှင့်ချီကာ ISO/IEC 10646 နှင့် Unicode Standard တို့တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၁၉⁠၉၄ ခုနှစ်လောက်မှစပြီး South and Southeast Asian Scripts တို့မှ ဘာသာစကား အသီးသီးတို့အတွက်Unipoint များ တင်သွင်းကြရာ The Unicode Standard ၏ Co-author ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ ISO/IEC JTC1/S C2/WG2 အတွက် အမျိုးသားအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ၊ Everson Typography မှ အီဗာဆန် သည် မြန်မာဘာသာ အက္ခရာစာလုံးများ အတွက် ယူနီကုဒ် point များရရှိရန် စတင်၍ တင်သွင်းခဲ့သည်။
၁၉⁠၉၆ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပြည်ပခရီးသွားရောက်ခဲ့သော မြန်မာကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အချို့ အင်တာနက်ပေါ်တွင် တွေ့ရှိချက်အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ ISO (International Standard Organization) ၏ ISO 10646 တွင် (၁၉⁠၉၄ နှစ်လောက်ကပင် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှ အီဗာဆန်ကတင်သွင်းခဲ့ပြီး ISO ၏ (၆)လ တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးဖြင့် စိစစ်ခဲ့သော) ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာ စနစ်တစ်ခုမှာ PDAM (Proposed Draft Amendment) နောက်ဆုံးမဲပေးဆုံးဖြတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်သည့် အဆင့်ထိရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သို့ အချိန်မီ အကြောင်းကြား တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ယင်း မြန်မာအက္ခရာ စာလုံးများအတွက် ယူနီကုဒ် point များမှာ (1408)16 မွ(14FF)16 ထိ (၁၂၈)ကွက်သာ လျာထားသတ်မှတ်ပေးထားပြီး အယ်ဗာဆန်၏အဆိုပြုချက်၌ (အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ... စသည့်) သရ Vowel များကို ဦးစွာနေရာပေး စီစဉ်ထားသောကြောင့် "အ" အက္ခရာမှာ ဗျည်းအက္ခရာ "က" ၏ ရှေ့ ၌ ရောက်ရှိနေရာယူထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းပါ ဝလိစဉ်နည်း (Sorting) နှင့် ကိုက်ညီမှု လုံးဝမရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ယင်းစနစ် နှင့်အပြိုင် အဆိုပြုချက်(proposal) တစ်ခုကို ISO/IEC JTC1/S C2/WG2 အစည်းအဝေးအမီ မိခင်မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပြနိုင်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာဖွံ့ဖြိုး ရေးကောင်စီက ``မြန်မာစာသုံး ကွန်ပျူတာစနစ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ Myanmar IT Standardization Committee (MITSC) ကို ပညာရှင် (၉) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ MITSC အဖွဲ့ ဝင်များမှာ ဒေါက်တာကျော်သိန်း၊ ဦးစံလွင်၊ ဦးထွန်းတင့်၊ ဦးသော်ကောင်း၊ ဦးခင်မောင်လွင်၊ ဦးသောင်းတင်၊ ဦးသိန်းထွဋ်၊ ဒေါက်တာအောင်မော်နှင့် ဦးပြုံးမောင်မောင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီသည် အပြိုင်အဆိုပြုချက်တစ်ခု တင်ပြရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန၏ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းကို ကိုးကားလျက် မြန်မာစာ အဖွဲ့ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်နှင့်တကွ အပြိုင်အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ဂျပန်နိုင်ငံ မှ ISO/IEC JTC1/S C2/WG2 အဖွဲ့ဝင် Mr. Takayuki အကူအညီဖြင့် ISO သို့ ပေးပို့တင်ပြခဲ့ရာ ၁၉⁠၉၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၁) မှ (၂၉) ရက်အထိ လန်ဒန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သောISO/IEC JTC1/S C2/WG2 တွင် လေ့လာသူအဖြစ်တက် ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်သိန်း ဦးဆောင်လျက် ဦးသောင်းတင်၊ ဦးသိန်းထွဋ်၊ ဦးခင်မောင်လွင်၊ ဒေါက်တာ အောင်မော် ပညာရှင်(၅)ဦးသည် ယင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ISO အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်၍ ပြောပိုင်ခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့်ကို မရရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပထမအဆိုရှင် အယ်ဗာဆန်အပါအဝင် ယူနီကုဒ် မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ WG2 မှ ပညာရှင်များ၏ ထောက်ခံတင်ပြချက်အရ MITSC တင်သွင်းသော အဆိုပြိုင် (ယပင့်၊ ရရစ်၊ ဝဆွဲ၊ ဟထိုး၊ မောက်ချနှင့် အသတ်ရှေ့ထိုးတို့ အား ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့်) ကို လက်ခံခဲ့ကာ နောက် (၆) လ တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးများ၌ Amendment 26 ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး နောက် (၆) လ တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးများဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူရန်ကိုပါ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာအက္ခရာ စာလုံးများအတွက် သတ်မှတ်နေရာကို လည်း U+1000 မှ U+109F အထိ (၁၆၀) ကွက်ထိ တိုးချဲ့ကာ Table 240-Row 10: Myanmar ဟူ၍ သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာစာကို Burmese အစား Myanmar ဟု ISO ဖော်ပြချက်များ ၌ သုံးစွဲရန်ကိုပါ သဘောတူခဲ့သည်။
၁၉⁠၉၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူအိုကာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ISO/WG2 အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံ MITSC မှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက် ခဲ့ရာ ယင်းအဆိုကို ပထမအဆင့်အပြီးသတ် Final Draft Admendment (FDAM) အဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
↑ Lepage, Marc (April–June 2003). "Afghans beat language obstacle to entering digital age" (PDF). Poverty Alleviation Initiatives 13 (2). United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Archived 12 October 2006 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုက်ကယ်_အယ်ဗာဆန်&oldid=697456" မှ ရယူရန်